စင်ကာပူ | Save Burma
Posts Tagged ‘စင်ကာပူ’
Singapore: Singapore Asks Burmese Activists To Leave The Country
SINGAPORE: Persistent defiance of the laws, not political pressure from the Burmese government, was the reason whyanumber of Burmese nationals working or studying in Singapore were asked to leave when their immigration passes expired.
Deputy Prime Minister and Home Affairs Minister Wong Kan Seng said this inawritten reply toaquestion tabled by nominated MP Eunice Olsen at this week’s sitting of Parliament.
She asked if Burma’s military rulers had pressured or requested the government to clamp down on anti-junta activists and deny them residence in Singapore.
In his reply, released Wednesday (17 Sept), Wong said the Burmese nationals disregarded Singapore laws by staging illegal activities, like outdoor protests, to pursue their political agenda.
This was despite repeated police advice to stick to lawful avenues.
Three Burmese nationals left Singapore for countries of their choice after their immigration passes were not renewed by the Immigration and Checkpoints Authority (ICA).
When contacted for further details, the Home Affairs Ministry identified the individuals as being members of the Overseas Burmese Patriots (OBP).
An informal grouping of activists, the OBP emerged in October last year to raise awareness about the political situation in Burma.
Citing illegal activities that the group staged, the ministry said: “The OBP is by no means the only patriotic group in Singapore or the only group that has organised activities to express their concern about the situation in Myanmar (Burma). However, unlike other groups which have conducted their activities inalawful manner, the OBP has chosen to do so in open and persistent defiance of our laws.’
One such activity wasastreet protest on 20 Nov last year during the Asean Summit. Some 40 people, carrying banners, walked downapavement outside the Orchard Parade Hotel to voice their discontent with the junta.
Citing the incident, Wong said the group intentionally protested near the summit’s Shangri-La Hotel venue to court public and media attention.
“Their unlawful behaviour was an unnecessary distraction to our security forces and could have compromised the security arrangements for the summit delegates, some of whom were heads of Asean governments.”
Police investigated the incident and, after consulting the Attorney-General’s Chambers, “exercised leniency and administered stern warnings in lieu of prosecuting the offenders in court”, he said.
Reports said the three Burmese activists who left Singapore took part in this protest.
Wong said that whileavast majority of the 50,000-strong Burmese community had been law-abiding and expressed views inalawful manner,asmall group “chose to break the law and yet defiantly demand the right to stay in Singapore as an entitlement”.
“They have tried to politicise the issue through the media and through uninformed foreign groups, in the process distorting the actions to remove them from Singapore as being politically motivated.
“They hope that political pressure will force the authorities to accede to their demands to continue staying in Singapore. The ICA has rightly decided that such persons are undesirable, and that they should leave.”
Foreigners are expected to respect the laws and local sensitivities in the same way that Singaporeans abroad are obliged to do so, he said.
“Some of these Myanmar (Burmese) individuals have enjoyed education subsidies and other benefits but have chosen to repay this with disrespect for our laws and to defy the authorities,” he added.
When told of the latest government statements, OBP spokesman Myo Myint Maung,aSingapore Management University third-year student, indicated that there would be no change in his group’s position: “We will continue with our political agenda in the most appropriate way that will serve justice and democracy without endangering Singapore society.”
(By KOR KIAN BENG/ The Straits Times/ ANN)
မြန်မာအချို့အား ဗီဇာတိုးမပေးသည့်ကိစ္စ စင်ကာပူဝန်ကြီး ရှင်းလင်း
စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ကို ဗီဇာသက်တမ်း ထပ်မတိုးပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက် မလိုလားအပ်သူတွေလို့ စင်ကာပူ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက Wong Kan Seng က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲပေးရန် ဧပြီ ၂၇ရက်က စုရုံးရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ပြီး အချို့က NO အမှတ်အသားပါ အနီရောင် ဦးထုပ်၊ တီရှပ်များ ဝတ်ဆင်ထားပါသည်။ (Photo: AFP)
မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားနဲ့ ကျောင်းသားတချို့ ရဲ့ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါလီမန်မှာ မေးမြန်းချက်ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက စာနဲ့ ရေးသား ဖြေကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်ရွက်ချက်ဟာ ဘယ်လို နိုင်ငံရေးဖိအားကြောင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ ဗီဇာ သက်တမ်းဆက်ပြီး မတိုးပေးခြင်းဟာ စင်ကာပူ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သူ၊ နိုင်ငံအတွက် မလိုလားအပ်သူတွေ နိုင်ငံက ထွက်ခွာသွားသင့်သူတွေသာ ဖြစ်ကြောင်း သူတို့ကို ဗီဇာမပေးတာဟာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ ပါလီမန်မှာ ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
ခုလို ဗီဇာသက်တမ်း ထပ်မပေးသူတွေဟာ စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာတွေရဲ့ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်နေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူရောက် မြန်မာတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ ဗီဇာသက်တမ်း ထပ်မတိုးပေးတဲ့ အတွက် အနည်းဆုံး မြန်မာသုံးဦး ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ထွက်ခွာသွားရပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် ရရှိထားသူတွေကို ဗီဇာသက်တမ်း တခါတိုးပေးပါက အရင်က ၅နှစ်သက်တမ်း တိုးပေးတာဖြစ်ပြီး အခုတော့ မြန်မာတချို့ကို တနှစ်စီသာ တိုးပေးပြီး တချို့ကိုတော့ ဗီဇာသက်တမ်း လုံးဝ မတိုးပေးတာကြောင့် စင်ကာပူနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စင်ကာပူရောက် မြန်မာကျောင်းသားတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမျိုးမြင့်မောင်ကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း မြန်မာတွေရဲ့ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ တကြိမ်တခါပဲ တရားမဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုမျိုးမြင့်မောင်။ ။ “ဒီ Orchard (မြန်မာသံရုံးအနီးရှိ လမ်းမကြီး) မှာ ဆန္ဒပြခဲ့တာကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးဟာ စင်ကာပူ ဥပဒေနဲ့အညီ ရဲရဲ့ ပါမစ်ယူပြီးတော့ လုပ်ခဲ့တာတွေ အများကြီးပဲ။ နောက်ဆုံး Orchard မှာ ဆန္ဒမပြခင် သုံးရက်အလိုမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Peninsular Excelsior ဟိုတယ်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲ ဆိုရင်တောင်မှ စင်ကာပူနိုင်ငံက အရွေးခံထားရတဲ့ အမတ် PAP အမတ်ပေါ့နော် မစ္စ် အိုင်ရင်း အန်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်က တက်ခဲ့တဲ့ ပွဲမျိုးပါ။”
“ဒီဟာကြောင့် ကျွန်တော်တို့က police permit (ရဲပါမစ်) တွေကို တောက်လျှောက် အမြဲတမ်းယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ အာဆီယံ summit (ထိပ်သီးအစည်းအဝေး) လွန်ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ပေါ့နော်၊ အာဆီယံ summit ပွဲမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြမှု တခုတည်းသာလျှင် ကျွန်တော်တို့ဟာ စင်ကာပူ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်လိုက်တာ ကျသွားတယ်။ သို့သော်လည်း အဲဒီ ချိုးဖောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ စင်ကာပူ အစိုးရဖက်ကနေ၊ ရဲဖက်ကနေ ကျွန်တော်တို့ကို ဝမ်နင်တွေ ပေးလာတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ အလားတူ ချိုးဖောက်တဲ့ အချင်းအရာမျိုး ဘာမှ ထပ်မလုပ်တော့ဘူး။”
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်းရှိ မြန်မာတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တချို့သော လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အားပေးကူညီမှုတွေ ပါဝင်နေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ကြောင်း ဒါပေမဲ့ ခုလိုစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ သဘောထား ချက်ခြင်းပြောင်းပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သူတွေကို ဖိနှိပ်လာတာဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဖိအား ပါနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။
Posted in ဒီဗီဘီ, အာရ်အက်ဖ်အေ, Varieties in English
Tagged with Activist, စင်ကာပူ, ဗီဇာသက်တမ်း, Burma, Demonstration, Eunice Olsen, Myanmar, OBP, Singapore, Wing Kan